बेलायतमा बन्यो नेपाली ‘कोदोको ब्राण्ड रक्सी’ : मुल्य ४ हजार माथी !
गृहपृष्ठ » अर्थ » बेलायतमा बन्यो नेपाली ‘कोदोको ब्राण्ड रक्सी’ : मुल्य ४ हजार माथी !
बुधबार १३ असोज, २०७८
लण्डन । नेपालमा कोदोबाट बन्ने रक्सीलाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला बेलायतमा नेपाली कोदोबाट उत्पादित रक्सी बजारमा बिक्री बितरण सुरु हुने भएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा पिउँदै आएको कोदोको रक्सी ब्रान्ड बनाउन शुरू गरिएको हो ।
बेलायतमा कोदो लिमिडेट कम्पनीको स्थापना गरी नेपालीहरुले कोदोको रक्सीको ब्राण्डिङ शुरू गरेको सूचना आएको छ ।
उक्त रक्सीको यही अक्टोबर १० गते अल्डरशटमा एक औपचारिक रुपमा उदघाटन गर्न लागिएको कम्पनीका निर्देशक जनक राईले बताउनुभएको लण्डन नेपाल न्यूजले जनाएको छ ।
उत्पादक कम्पनीका अनुसार ‘प्योर कोदोको रक्सी’ र ‘तीनपाने कोदोको रक्सी’ गरी दुई प्रकारको रक्सी उत्पादन गरी विक्री शुरु गर्न लागिएको छ ।
लोकप्रिय कोदोको रक्सीलाई कम्पनीले ‘प्योर कोदोको रक्सी’ र ‘तीनपाने कोदोको रक्सी’ गरी दुई प्रकारको रक्सी उत्पादन गरेको छ ।
तीनपाने कोदोको रक्सीको २० सी एल बोटलमा २०० एमएल रक्सी राखिएको छ भने ६० प्रतिशत अल्कोहल रहेको छ, यस्तै ‘प्योर कोदोको रक्सी’मा ७० सी एल बोटलमा ४० प्रतिशत अल्कोहल रहेको बताइएको छ ।
कम्पनीले ‘प्योर कोदोको रक्सी’ प्रतिबोतल २५ पाउण्ड ९९ पेन्स र ‘तीनपाने कोदोको रक्सी’को १२ पाउण्ड ९९ पेन्स मूल्य तोकिएको प्रबन्ध निर्देशक राइले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कम्पनीमा राई प्रबन्ध निर्देशक सहित जितेन्द्र चेम्जोङ, भरतमणि लिम्बु, आकाश सुनुवार, सुमन गुरुङ लगानीकर्ता रहेको बुझिएको छ ।
विशेषगरी राई, गुरुङ, लिम्बु, मगर, तामाङ, शेर्पा लगायत जनजातीहरू माझ कोदोको रक्सी निकै लोकप्रिय रहेको छ । उक्त रक्सीलाई बेलायतमा व्यवस्थित तरिकाले बेच्न लागिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले यो रक्सी भिन्न स्वादको रहेको र यसले पिउने मान्छेलाई सहज र न्यानो महशुस गराउँने अनुशन्धानले देखाएको छ । ‘यो रक्सीले नेपाल र नेपालीहरुको पनि झल्को दिनेछ, वेलायतमा नेपालीत्व प्रर्वद्धन समेत हुने विश्वास उत्पादन कम्पनीको रहेको छ ।
१० तारिखमा अल्डरशटमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुको उपस्थितीमा रक्सीको औपचारिक रुपमा उदघाटन गर्न लागिएको हो । हाल मिडल्याण्डमा रहेको कारखानाबाट नेपाली मूलको कोदोको रक्सी उत्पादन भइरहेको छ ।
यसको मार्केट अनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि कारखाना स्थापना गर्नेबारे सोँच बनाएको कम्पनी स्रोतको भनाई छ । कम्पनीमा आवद्ध युवाहरु बेलायतमा यसअघि नै ग्लोबल बुलियन भल्ट नामक लकर सुविधा तथा अन्य व्यावसायहरुमा पनि आवद्धता रहेको छ ।
दसैँपछि लगातार बढेको सुनको मूल्य आज ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ नयाँ मूल्य ?
अब २० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
सुनको मुल्य लगातार उकालो, कति पुग्यो आज ?
फेरी बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
बचतकर्ता र शेयरधनीको रकममा रजाई : बैकका सिईओको तलब दुई करोड !
कृषि विकास बैंकको यस्तो छ गैरकानुनी धन्दा, सबैलाई चिन्ता थप्ने तथ्य बाहिरियो
सावधान: एनआईसी एशिया बैंकले तपाइलाईपनि यसरी लुट्ला !
हेर्नुहोस् बैकले कसरी लुट्छ : लुटेरा बैक चिन्नुहोस् नत्र तपाईको सम्पत्ति सर्वस्व बनाउनेछ !
न्यादी हाइड्रोपावर आईपीओको नतिजा सार्वजनिक : यी चार वटा साइटबाट हेर्न सकिने
यो हाइड्रोपावर आईपीओ बाँडफाँड भोलि
नेपालमा १ अर्बको त तास मात्र आयात